Shaati wear Dharka shaqada • farshaxanimada kumbuyuutarka ee P&M
Qof kasta oo shaqaale ah waa inuu si hufan isu soo bandhigaa, maxaa yeelay isagu waa kan ku shaqeeya magaca shirkadda waana wakiilkeeda. Shaati badiyaa waa shey aan lakala sooci karin dharka shaqada xafiiska, meelaha adeega macaamiisha, soo dhaweynta, laakiin kaliya maahan in loo adeegsado jagooyin badan
warshadaha kala duwan.
Waa dhar tayo sare leh oo ka yimid soosaarayaasha Polishka iyo shisheeyaha. Qalabyadu way ku fiican yihiin taabashada, si adag ayaa loo tolay, taas oo hubinaysa adkeysigooda. Waxaas oo dhan si shaatiyada loogu isticmaali karo shaqo maalmeedka muddo dheer, taas oo la xiriirta dhaqista joogtada ah, laakiin soosaarayaashu sidoo kale tixgeliyeen. Haddii isticmaaluhu raaco talooyinka ku qoran taaga, shaadhka ayaa u adeegi doona bilo badan.
Naqshad aan waqti lahayn
Bakhaarkayaga pm.com.pl waa laga heli karaa funaanado shaqo iyo shaati caadi ah, moodello xarrago leh.
Yihiin gabal aan waqti lahayn, qof walba waa inuu lahaadaa ugu yaraan hal shaati oo tayo fiican leh. Waxaa lagu kala soocey xarrago waxayna ku habboon yihiin munaasabad kasta. Marka waxaad labadoodaba isugu dari kartaa isku-dhafnaan xarrago leh oo aan rasmi ahayn. Kuwa ay saxsanaanta shaqada u qalmaa fiiro gaar ah, maxaa yeelay faahfaahinta ugu yar ayaa lagu sifeeyay ugu badnaan, taas oo la kulmi doonta rajooyinka macaamiisha aadka u dalbanaya. Shaati waxaa loo heli karaa laba nooc - oo leh gacmo gaaban iyo kuwo dhaadheer.
Shaadh dayrta iyo jiilaalka
Shaati shaqeeya Dayrta iyo jiilaalka waxaa lagu kala soocaa ugu horreyn iyadoo laga ilaaliyo heerkulka hooseeya iyo dabaysha. Shaadhadhku waxay ku yimaadaan noocyo kala duwan, waxay sidoo kale la yimaadaan mid dheeri ah, oo qaro weyn kululaynta.
Waad ku mahadsan tahay astaamahan, waa la gashan karaa si isku mid ah dhogorta. Raaxada kuleylka ah waxay u tarjumaysaa fiicnaan wanaagsan, taas oo iyaduna saamayn ku yeelanaysa hufnaanta wanaagsan ee shaqaalaha.
Dhamaan shaatiyadaha waxaa laga sameeyay waxyaabo tayo sare leh. Dabcan, marka la eego xaaladaha shaqada ee diiran ee xaaladaha cimilada isbeddelaya, shaatiga ayaa la gashan karaa iyadoo aan la furin Funaanad hoosta. Badhannada si adag loo tolay waxay yareeyaan fursadda go'itaanka shilka. Adoo maalgashanaya alaab tayo wanaagsan leh, oo sifiican loo sifeeyay, waad hubin kartaa inay tahay wax iibsi in kabadan hal xilli.
Aad bay caan u yihiin funaanadaha flannel, jilicsan oo jilicsan Faa'iido weyn ayaa ah goyntooda, taas oo aan ku keenin raaxo darro shaqada, iyo mahadsanid dahaadhka, uma baahna lakabyo dheeri ah.
Shaashadda dahaarka REIS flannel
Funaanado xarrago leh bixitaanka iyo adeegga waa isku dhafka naqshadaha caadiga ah iyo adkeysiga kor loo qaaday. Moodooyinka aad ka heli karto dukaankeenna waxay ka yimaadeen soosaarayaal sumcad leh oo fiiro gaar ah u leh faahfaahinta iyo hababka tolidda. Qurxinta quruxda badan ayaa sifiican ugu turjumi doonta shaqaalaha iyo soo dhaweynta sumadda.
Waa muhiim in la doorto cabbirka saxda ah maxaa yeelay cabir khaldan ayaa xoogga saari kara faa'iido darrooyinka guud ahaanna ka hor imaan kara. Sidoo kale waa mudan tahay in fiiro gaar ah loo yeesho naxwaha, kuwa qafiifka ah ayaa lagula taliyaa xagaaga, kuwa qaro weynna waxaa loola dhaqmaa sidii kuwa guud - waxay si fiican u shaqeeyaan sanadka oo dhan. Daryeelka shaatiyada la bixiyay waa wax iska fudud, kaliya raac tilmaamaha ku qoran calaamadda, oo aan ka duwaneyn talooyinka daryeelka caadiga ah ee alaabtan.
Shaatiyada badankood, shaarar qurxan iyo shaati labadaba, shaqsi ahaan ayaa loo calaamadeyn karaa daabacaadda kombiyuutarka. Waxaan leenahay jardiinada mashiinka noo gaar ah, sidaa darteed waxaan kugula talin karnaa sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo calaamadeynta, halka la dhigayo astaanta lagana caawinayo xulashada cabbirada xargaha.
Shaatiyada shaqada ee Allegrodhar qaro weyn oo loogu talagalay shaatiyada shaqada iskutallaabteedadhar qaro weyn oo loogu talagalay shaatiyada, gaar ahaan shaatiyadaha shaqadafunaanadaha ka shaqeeya suufka raggafunaanadaha garabka ragga ee shaqeeyashaati flannelshaararka flannel shaqada Allegroqiimaha shaati flannelfunaanadaha flannelka shaqada haweenkashaati faneel shaqo weynShaati-gacmeedyada Olxsoo saaraha shaati flannelshaati flannel shaqeeyaanfunaanadaha shaqada raggafunaanado shaqo oo dahaaranfunaanado shaqoShaatiyada shaqada ee Allegrofunaanadaha shaqada suufkafunaanadaha shaqada dumarkaoo lagu daray cabbirka shaararka shaqadafunaanadaha shaqada ee flannelfunaanadaha shaqada xagaagafunaanadaha shaqada raggafunaanado shaqo oo dahaaranfunaanado shaqo oo milicsanayaShaatiyada shaqada ee la jeexjeexayfunaanado shaqo oo daabacanshaati flannel